Umkhankaso wemvilophu owethulwe nguMapama ukulwa nesomiso | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngokuya ngesimo sesomiso iSpain esibhekene naso, uMnyango Wezolimo kanye Nezokudoba, Ezokudla Nezemvelo wethule lo mkhankaso ngoLwesibili «Amanzi asinika impilo. Masimnakekele », ngenhloso yokukwazi ukwenza umphakathi wazi ngesidingo sokonga amanzi lapho kunemvula encane elindelwe unyaka wonke.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi inkathi yesomiso injani?
1 «Amanzi asinika impilo. Ake siyinakekele »
2 Ukunakekela amanzi kungumsebenzi wethu
3 Izinhlelo zesomiso nemikhawulo
«Amanzi asinika impilo. Ake siyinakekele »
Ngenhloso yokwenza ukusetshenziswa kwamanzi okusimeme nokusebenzayo lapho sibhekene nesimo sesomiso iSpain esibhekene naso, umkhankaso wokufundisa ngezemvelo “Amanzi asinika impilo. Ake sinakekele.
Amanzi kungumthombo obaluleke kakhulu wokuphila emhlabeni futhi, nakanjani, ngentuthuko yomuntu. Ngeshwa, inani lamanzi elitholakala enhlonhlweni liyancipha ngenxa yokwehla kwemvula nokwanda kwamazinga okushisa. Lezi yizinto ezimbili okufanele uzicabangele, ngoba akugcini ngokuna nje kancane, kodwa futhi amanzi amaningi ayahwamuka.
Yize kunamagagasi abandayo nezimpi esidlule kuzo eSpain, imithombo yethu yamanzi iyaqhubeka nokukhathazeka, ngakho-ke asikwazi ukwehlisa ukuqapha kwethu.
Unyaka wokugcina wamanzi, phakathi kuka-Okthoba 1, 2016 noSepthemba 30, 2017, ubulokhu, ngokusho kweState Meteorological Agency (Aemet), owesishiyagalombili owoma kakhulu kusukela ngo-1981.
Unyaka we-hydrological uqale ngo-Okthoba 1, 2017 futhi, ngokusho kwedatha ye-Aemet, imvula esiqongelelwe phakathi kuka-Okthoba 1 noDisemba 31 Ama-43% angaphansi kwamanani emvula ajwayelekile lokho kuqoshwa minyaka yonke.
Ngakho-ke, kubalulekile ukwazi ukuthi kufanele sisebenzise kahle amanzi ukuze singachithi amalitha amaningi emisebenzini yethu.
Imvula nayo ivame ukulinganiswa ngeminyaka yekhalenda, okungukuthi, kusuka ngoJanuwari kuya kuDisemba. Ngale ndlela, unyaka we-2017 uphele ngo unyaka wesibili omile kakhulu kusukela ngo-1965, kucatshangelwa ukuthi ezinye izindawo zaseSpain zibhekane nesomiso unyaka wesihlanu zilandelana.
Ukunakekela amanzi kungumsebenzi wethu
Umkhankaso okhishwe nguMapama uzothuthukiswa kuthelevishini, emaphephandabeni abhaliwe, kwi-inthanethi, ezinkundleni zokuxhumana nasezindaweni zomphakathi. Njengoba thina bantu sisebenzisa amanzi nsuku zonke, kungumsebenzi wethu ukuthi siwasebenzise kahle futhi sifunde nokonga amanzi. Ziyizenzo nje ezincane njengokuvala umpompi lapho ungasetshenziswa, ukunisela ngezikhathi lapho ilanga lingahwamuki amanzi, lisebenzisa imithombo edonsa kabili, ukulawula amanzi asetshenziswa eshaweni, njll. Lezo ezenza umehluko ekusetshenzisweni ngokuphelele kwamanzi kwabaseSpain, ngoba, noma ezingeni ngalinye kungenzi mehluko omkhulu, singabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-48.
Lapho usebenzisa izinto ezifana nomshini wokuwasha, kubalulekile ukuzisebenzisa lapho zigcwele ngokuphelele, njengoba kungasisiza wonga ngaphezu kwamalitha angu-3.000 XNUMX ngenyanga. Ukulungisa ukuvuza kompompi kusenza silahlekelwe ngaphezu kwamalitha angama-30 ngosuku. Ngakho-ke, ngokubheka zonke lezi zibalo ekusetshenzisweni kwamanzi, lo mkhankaso usikhumbuza ukuthi amanzi abaluleke kakhulu emhlabeni kangangokuba kuyisizathu sokusinikeza impilo, ngakho-ke kubalulekile ukuwanakekela nokwazi ukonga.
Izinhlelo zesomiso nemikhawulo
Ebhekene nesimo sesomiso, uMnyango Wezolimo kanye Nezokudoba, Ezokudla kanye Nezemvelo wenze izinyathelo ezahlukahlukene ukunciphisa imithelela yakho, futhi ukuhlela okwenziwe eminyakeni yamuva sekwenze ukuthi kugwenywe imikhawulo futhi kuthinte abantu.
Lapho kwenzeka isomiso isikhathi eside ezweni, Izinhlelo Zesomiso ziyasungulwa. ESpain, lezi zinhlelo zesomiso zavunywa ngo-2007 futhi ziyabuyekezwa. Lezi zinhlelo zisungula amaphrothokholi wokusebenza lapho kunesimo sokushoda kwemithombo yamanzi futhi kusekelwe ekulindelweni nasekudalweni kwezinqubomgomo zezenzo ze-Administration ekuphathweni kwamanzi.
Lokhu kwenzelwa ukunciphisa umthelela kwezemvelo, kwezomnotho nakwezenhlalo obangela isimo sesomiso njengaleso esihlupheka eSpain.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isomiso » Umkhankaso owethulwe nguMapama wokulwa nesomiso